Zvinhu zvekudzidza kubva kuLinux kutama | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft inotenga, Chile inotengesa. Ndiwo waive musoro wenyaya, kumashure pakati pa2007, wemablog pamusoro pechibvumirano chakavanzika chekuti gurukota renguva iyoyo raive nevatungamiriri vekambani yeRedmond uye izvo zvaisanganisira kwete hukama hwakananga chete asi kunyanya kuvimba nedata remunhu vagari vari mukambani iyi.
Iye zvino Hurumende yeChile iri munzira yakasarudzika kwazvo, ichibvuma kushandiswa kweFree Software mukutonga kwayo seyakavimbika, kunyangwe isina chinangwa chekufarira Mahara Software. Saka vakapa chidzidzo pane zviri nyore uye nekukwanisa kutamira kune Mahara Software mumahofisi eruzhinji.
Vakaidaidza kuti "Kushandisa Mahara Software muHurumende" uye kubva pachidzidzo ichocho kwakauya chidzidzo pamusoro pekushandisa (How Free Software is used), a Migration Guide, Economic and Social Impact Analysis (Kana zvichidhura kuishandisa kana zvirizvo zvakanaka kune nzanga)
Kuwedzera pakuve inonakidza kudzidza kumatunhu pamwe nevevagari venyika ivo, mazhinji e mhedziso yechidzidzo ichi isu vanoshumira kutarisana nekutama mune chero imwe mamiriro (kubva pane yeshamwari kuenda kune yesangano) uye ini ndichaedza kupfupisa izvi mune runyorwa.
Kurovedza hakunzvengeki: Nekombuta yemumba kana nemushandi, zvinogara zvakafanira kuvadzidzisa kuti vadzivise kushamisika. Kunyangwe Windows kudzidzisa kusingawanzo kuve kuri madikanwa, zvinoshamisira kuti vangani vashandisi veWindows vasingakwanise kushandisa yavo yega michina mune mashoma mamiriro, kubva kuvhura / kudzima PC kusvika pakushandisa chirongwa chakakodzera pabasa ravo. Kana vachizoshandisa Linux kana zvimwe zvirongwa zvemahara mukati meWindows, zvakanaka kuti muvadzidzise kuzvishandisa kunze kwekunge iyo curve yekudzidza isingatenderi.
Haasi munhu wese anoziva zvakafanana: Vamwe vashandisi vari nani pakubata PC kupfuura vamwe uye izvi zvinowirirana zvakananga nekugona kwavo kudzidza kushandisa nharaunda nyowani. Mushandisi anogona kunge aine imwe nhanho yeruzivo iyo inokwana kutamira kuchishandiso chitsva kana nharaunda (senge itsva distro) uye anokwanisa kubatsira vezera ravo. Kunzwisisa izvi kunotibatsira kuronga kutama.
Ivo havafanirwe kuve akazara kana asina kujeka: Pamusoro pekutyisidzira avo vanoona nezvekufambiswa kwesystem kwayakaunzwa, chaive chikonzero chekudzokeresa kanopfuura kamwe. Zvichida hazvidiwe kuisa ese Ubuntu, zvingave zvirinani kutanga nekuvaisa kuti vashande neOpenOffice, Thunderbird uye Firefox.
Kuramba kuchinja ndekwechisikigo: Izvo zvisingazivikanwe zvinotyisa, kuchinja ipapo kunogona zvakare kuve basa repfungwa. Panyaya yemushandisi wemba, anorarama izvi zvisati zvaitika, nekuti ndiye anobvuma kutama, panguva ino zvinoshanda zvakanyanya musangano, uko chiremera chinoda shanduko uye zvinoitwa. Izvo zvirevo zvichave asi padyo navo panofanirwa kuve nharo dzekuchinja. Zvinofanira kunge zviri nani kune mushandisi, kana zvisiri, hazvina musoro.
Unofanira kuronga: Izvi zvinomhanyisa kunyangwe kune avo vanofamba vega, pamwe chete nerubatsiro rwezvinhu zvavanoverenga paInternet kana kune iyo IT department yedhipatimendi reruzhinji, kutama kazhinji kunokundikana nekuti ivo havana kunyatsofungidzirwa kunze. Inogona kunge iri zano rakanaka kutora chidimbu chepepa nepenzura uye dhonza mitsara uchironga maitiro ekuita kuti PC yako iite neLinux, semuenzaniso.
Izvo zvinotora kuti basa riitwe: Zvakakosha kuziva kana tichizoda chirongwa chakaenzana neicho chatinoshandisa muWindows, izano rakanaka kuti tizive kuti chirongwa ichi chinoshanda sei, tinogona kubvunza paInternet. Zvingangodaro, kana ukaenda kubva paWindows kuenda kuLinux, zvese zvawakashandisa muWindows zviripo, asi nerimwe zita kana kuti chimwe chinhu chiriko, asi hazvina kukwana.
Dzimwe nguva kutama hakuna kururamiswa: Zvinoenderana neongororo iyi, angangoita makumi matatu muzana emakomputa eHurumende haana mukana wekutama nekuti, nekuda kwemalayisensi akabhadharwa kare kana nekuda kwemabhenefiti nematambudziko ekuchinjisa mafomati, semuenzaniso, hazvigoneke. Zvinosuruvarisa asi zvinogona kuitika kuti kunyangwe hazvo isu tichida zvakadii, kuchinjira kuLinux haisi sarudzo kana zvatinoita nePC yedu zuva nezuva zvichititadzisa kuita kudaro. Mune sangano, Software ingangoshandiswa inogona kunge isipo kana iine akasiyana zvachose mafomati.
Ndezvipi zvimwe zvinhu zvinofanirwa kufungwa nezvazvo kana uchitama?
Zviitiko zvekutama mumasangano anoita kunge akajairika kwauri?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Zvinhu zvekudzidza kubva kuLinux kutama
zvakanaka kuti zvidzidzo zvinoitwa pano, uye pfungwa yeSL inofungidzirwa
zvizhinji zvezvinhu zviripo zvinhu zvinozivikanwa nemunhu wese… asi zvakakosha kuti uzviwedzere pakudzidza….
asi iyo yekupedzisira poindi yakandisiya ndichifunga ...
Kune avo vasingazive, makore mashoma apfuura, Chile yaizosaina chibvumirano chakavanzika zvachose neM $, uye kuti senator weNavarrese yakawana nekupokana nekuda kwemutengo wakakwira wemarezinesi aizobhadharwa kwaari ... payakauya pachena "yakanyangarika" uye ivo vakakanda mutevedzeri kubva kuna «TATA» kujeri
ikozvino kudzokera kunzvimbo yekupedzisira ... pese pandinoenda kukhemisi ndinoona pane pc «Mushandisi - COBOL» «BHUKU - COBOL» XDDDD uye sekuverenga kwandaita zvinonetsa kubva kubva kuhwina ku linux iwo mapurogiramu .. Kunze kweizvozvo kune vashoma kwazvo programmer yemutauro iwoyo, uye zvaizoda mafarmacy mari zhinji (uye mamwe makambani anoshandisa iwo maprogramu) saka handifunge kuti mafarmacy anoda kutama XDD
PS: kana ndakanganisa pane chimwe chinhu ndiudze: D
PD2: ndiani achave mutsva blogger @?
Iyo 'joke' yekutama, ngatitii, ndeyekuti munhu wese anotama, uye kwete vamwe. Wese munhu zvakaenzana.
Ini ndaigona kudzokorora trite uye yakaipa nzira yekushandisa OpenOffice uye MSWord panguva imwe chete mukambani imwe chete, asi ini ndanga ndatokuudza nezvazvo. Ichi chiitiko chakaipa chakaitika neAptlook neThunderbird: kunze kwemaemail, mavara anopenga uye yambiro iyo isina kumbosvika.
Saizvozvo, mune zviitiko zvekutama, nyowani uye zvekare masisitimu kana matekinoroji anowanzo garisana ... kanokwana kwenguva ...
@ N @ ty hongu, asi zvinoenderana nenyaya uye nekuronga, zvaunondiudza idambudziko, ndinogona kuzvifungidzira, asi ko kana zvinhu zvehupenyu mukambani vamwe vashandi vachingoisa mahara mahara (pano ndiri vachigadzira kuti ivo havana kudzidziswa kana kuti kwete zvizere) uye kune rimwe boka rine Linux distro, havachave nematambudziko ekuenderana gwaro, mafaera aizotenderera pasina matambudziko uye masayendisiti emakomputa nevarairidzi vanogona kugadzirisa iyo isinganzwisisike pothole.
Pazasi mutsara: Zvinoenderana nevarongi.
Shanduro yechinyorwa kubva munaKurume 11:
"Mapurisa eFrance: Isu takachengetedza mamirioni emauro nekutora Ubuntu"
Munyaya yemapurisa eFrance yaive:
Panyaya yesangano ratinoziva ravanoshandisa michina mishanu, chinhu chakadai.
1st) Firefox (5/5, kwemakore maviri)
2nd) Thunderbird (5/5, kwemakore maviri)
3rd) OOo (2/5, kwemwedzi mitatu)
Ndinoda kunongedzera kuti nekupinda kweODF neOfisi 2007, kumwe kunyongana kuri kubuda mukuchinjana magwaro pakati pevashandi vehutongi hweiri nemamwe masangano kana vanhu vavanosangana navo. Ini ndinofunga izvi zvinopa chokwadi chekuti imwe yeWindows XP default marongero i "Viga mafaira ekuwedzera bla bla bla".
Yakanaka mhinduro: yakazara kutama kana hapana.
Mhinduro chaiyo: kufambira mberi kwekutama kana chimwe chinhu.
Kungoerekana kutama hakuna. Kutama kune miganhu yakawanda sekushandisa kunoitwa nemidziyo. Kana musangano mune vanhu gumi nevaviri vanogovana mashandisirwo emakomputa seizvi:
- 10 ipa shandisa A
- 1 inopa shandisa B
- 1 inokupa iwe kushandisa C
uchafanirwa kuita kutama kwako muzvikamu zvitatu, zvisingaite sezvazvinogona kuita.
Uye muchikamu chega chega pachave nezvikamu zvakawandisa sezvishandiso zvinoshandiswa.
Izvo zvakakosha kwazvo kuti kugadzirwa uye kunyaradzwa kwevashandisi hazvisiye kutarisisa kwemunhu ane chekuita nekutama. Iwe unofanirwa kufunga kuti, mune yakanakisa kesi, sarudzo dzekukurumidza dzinokonzeresa maawa masere ekutambudzika kwemazuva ese kune mumwe neumwe weavo vanobatwa. Mumamiriro ezvinhu akaipisisa, kunyorera kwekare kuchadzoserwa chinyararire iwe usingaone. Muzviitiko zvese izvi, unenge wagadzira kurambwa kwemaapplication aunoda kuita.
Ini ndinofunga kuti nhasi kutama kuenda SL kwakadai:
- Multimedia: Hapana matambudziko. VLC paWindows uye Totem ine otomatiki macodec pane inobhururuka paUbuntu.
- Kutumira mameseji pakarepo MSN yakanyanya kunaka.
- Kubhurawuza paWebhu: Hapana kunetsa sekureba sekunge iwe usingade kumwe kuita ActiveX yaitwa. Neraki ivo ndivo vega.
- Tsamba: Pasina Shanduko pasina matambudziko. Nekuchinjana, ini handizive kana chimwe chinhu chinodikanwa pane kumisikidza POP3 kana IMAP4 pane server.
- Hofisi otomatiki: Handizive zvekutaura pano. Handina ruzivo rwakakwana. Pfungwa dzako, mapurisa eFrance akatama zvachose kubva kuMSO kuenda kuOOo makore mana apfuura uye timu yaObama yakaita chidzidzo gore rapfuura maererano neOOo inogona kushandiswa mu4% emahofisi emubatanidzwa eUS. Iwo haasi mareferenzi akaipa.
Nzvimbo dzandichiri kuona kuwanda kwekutama zvisingaite iri muCAD kana graphic dhizaini mahofisi. Kana AutoCAD kana Photoshop inoshanda musvinu muWine. Kunyangwe izvi zvichizotanga kushanduka mumakore anotevera 2-3 makore nekuti waini iri kuvandudza zvinoshamisa uye zvishoma nezvishoma dzimwe nzira dzinogona kutsiva AutoCAD ne Photoshop kune mamwe makesi zvakare anoonekwa uye achishanduka, seQcad, SketchUp, GIMP, nezvimwe.
Zvitsva zvitsva muInternet Explorer 8: takamboonana here zvisati zvaitika?